A message to all UN staff from UN Resident and Humanitarian Coordinator a.i Knut Ostby on 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence
We marked the International Day for the Elimination of Violence against Women and Girls and launched the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence on Sunday 25 November.
In line with the theme of this year’s campaign “Orange the World: #HearMeToo” our first event saw Yangon City Hall lit up in orange in partnership with the Deputy Mayor of Yangon Region, Daw Hlaing Maw Oo, on 25 November.
On Monday 26 November, we participated inagovernment-organised, high-level meeting marking the start of the 16 Days of Activism campaign in Nay Pyi Daw.
Events aiming to honour the voices of survivors and grassroots activists are taking place all over the world as gender inequality and violence against women and girls are among the most pressing challenges of our time.
Globally, one in three women will experience physical or sexual abuse in her lifetime.
We must end the culture of silencing and put survivors at the centre of our responses.
The issues of gender inequality, discrimination and gender-based violence are significant in Myanmar.
Onlyahalf of working-age women are active in the country’s labour force and women are critically underrepresented in government.
Further, women and girls from ethnic and religious minorities, those in areas affected by conflict, and those who are stateless remain especially vulnerable. These women and girls often suffer multiple forms of gender-based violence and the vast majority of cases go unreported and unacknowledged. Impunity for those responsible, be it in the home, workplace or in conflict situation, underpins the heightened challenge of addressing these issues in Myanmar.
We are atajuncture in history where Myanmar has the opportunity to adopt the Protection and Prevention of Violence against Women law. This law is critical to protecting women and girls and to holding perpetrators of violence accountable.
I commend the policymakers who have developed this law so that it can soon be considered by Parliament. I believe that Myanmar’s elected representatives recognise the significance of this law.
As UN staff, your contribution to addressing the issue of gender-based violence in Myanmar is critical. Every agency is providing strategic support to the government in this area. From the distribution of targeted humanitarian aid and providing microfinance options to women entrepreneurs, to training social workers and the police – the UN is at the forefront of the effort to eliminate violence against women and girls for good.
The Secretary-General said eliminating gender-based violence and gender inequality “is an issue of fundamental human rights.” This isaUN’s priority and it is important that we continue to programmatically engage on this topic.
It is equally important that we serve as role models – at home, in the workplace, and in our communities.
Please continue to follow the 16 Days of Activism campaign on social media using the hashtags #HearMeToo, #OrangeTheWorld and #16Days. Talk to colleagues, civil society organisations, and your family – and invite them to be part of the 16 Days movement.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းအားလုံးသို့ ပေးပို့သော သတင်းစကား
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုအား စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေး အမျိုးသမီးများအသံနားထောင်ပေး - Orange the World: #HearMeToo” နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့၏ ပထမဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တော် ဒုတိယမြို့တော်ဝန် ဒေါ်လှိုင်မော်ဦး နှင့် ပူးပေါင်းကာ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမကြီးတွင် လိမ္မော်ရောင်မီးများ ထွန်းညှိခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့တွင် နေပြည်တော်တွင် ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုကို စတင်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် အစိုးရမှ စီစဉ်ကျင်းပသော အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ကျား-မတန်းတူ မညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအား အကြမ်းဖက်မှုသည် ယခုခေတ်အခါတွင် ရင်ဆိုင် နေရသော အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုများထဲတွင် ပါဝင်နေသည့်အတွက် အကြမ်းဖက်ခံရသူများ၏ အသံကို လေးစားသောအားဖြင့် ကျင်းပသည့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်များနှင့် အောက်ခြေအဆင့် လှုပ်ရှားမှုများ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းတွင် ကျင်းပဆောင် ရွက်နေကြပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်၌ အမျိုးသမီးသုံးယောက်တွင် တစ်ယောက်သည် သူမ၏ ဘဝတစ်သက်တာတွင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်း ဖက်မှု သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရားပြုမှုကို ခံစားကြရပါသည်။
ဆိတ်ဆိတ်နေကာ ငြိမ်ခံနေသည့် အလေ့အထကို အဆုံးသတ်ကာ ကျွန်တော်တို့သည် အကြမ်းဖက်ခံရသူများကို ဗဟိုပြုကာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။
ကျား-မတန်းတူ မညီမျှမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်သည်။
အလုပ်လုပ်နိုင်သော အသက်အရွယ်အတွင်းရှိသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ထက်ဝက်သည်သာ နိုင်ငံ၏ လုပ်သားအင်အားစု အတွင်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှု အလွန်ပင် နည်းပါးနေပါသည်။
ထိုမျှသာမက တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူနည်းစုအုပ်စုများမှ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများ၊ ပဋိပက္ခဒဏ် သင့်သော ဒေသများမှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၊ နိုင်ငံမဲ့သူ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများသည် အထူးပင် ထိခိုက်လွယ်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများသည် ကျား-မအခြေ ပြုအကြမ်းဖက်မှု ပုံစံမျိုးစုံကို ခံစားရလေ့ရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုအများစုသည် သတင်းပို့တိုင်ကြားမှုများ၊ အရေးတယူဆောင် ရွက်ပေးမှုများမရှိဘဲ ဖြစ်နေပါသည်။ နေအိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပဋိပက္ခအခြေအနေတွင်ဖြစ်စေ ထိုအကြမ်း ဖက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများသည် အပြစ်ပေးခြင်းမခံရဘဲ လွတ်မြောက်နေသည့်အဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဤ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် သမိုင်းတွင်အချက်အချာကျသော အခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေအား အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေသည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအား ကာကွယ်စောင့်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်သူများကို တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဤဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့သော မူဝါဒချမှတ်သူများအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုပါသည်။ ထိုသို့ ရေးဆွဲပေးခဲ့ သည့်အတွက် မကြာမီကာလတွင် လွှတ်တော်မှ စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များသည် ဤဥပဒေ၏ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် UN ဝန်ထမ်းများ၏ ပါဝင်ကူညီမှုမှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ UN အဖွဲ့အစည်းတိုင်းသည် ဤကဏ္ဍတွင် အစိုးရအား မဟာဗျူဟာကျ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပေးနေကြပါသည်။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများအား ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အသေးစားချေးငွေများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းမှစ၍ လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းအထိ လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် UN သည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ အပြီးအပိုင် ပပျောက်သွားစေရန် ရှေ့တန်းမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကျား-မအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ကျားမတန်းတူ မညီမျှမှုတို့ ပပျောက်စေ ရေးသည် “အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် UN ၏ ဦးစားပေးကိစ္စရပ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့သည် ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ်များ စနစ်တကျရေးဆွဲကာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အလားတူပင် ကျွန်တော်တို့သည် နေအိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော်တို့၏ ရပ်ရွာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ တွင် ဖြစ်စေ စံနမူပြနေထိုင်ကြရန်လည်း ညီတူညီမျှအရေးကြီးပါသည်။
လူမှုမီဒီယာများပေါ်တွင် #HearMeToo ၊ #OrangeTheWorld နှင့် #16Days ဟူသော hashtag များကို အသုံးပြုကာ ၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လက် follow လုပ်ကြပါ။ မိမိတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း များနှင့် သင့်မိသားစုများအား ပြောပြကာ ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ကြပါဟု တိုက်တွန်းပြောကြား လိုပါသည်။
Download PDF version: English & Myanmar